जाजरकोट दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारले शव बुझेनन्, चालक फरार – Satyapati
जाजरकोट दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारले शव बुझेनन्, चालक फरार
जाजरकोट । जाजरकोटको जुनीचाँदेमा हिजो भएको जीप दुर्घटनामा वडाध्यक्षसहित छ जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा एक जना बेपत्ता र एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । सदरमुकाम खलङ्गाबाट जुनीचाँदेतर्फ गइरहेको भे १ ज ९३५ नम्बरको जीप जुनीचाँदे गाँउपालिका–१, औलभीरमा दिउँसो ३ बजे दुघर्टनामा परेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी किशोर श्रेष्ठका अनुसार मृत्यु हुनेमा जुनीचाँदे गाँउपालिका–१ का वडाध्यक्ष ५० वर्षीय अमरबहादुर शाही, वडा नं. १ कै ६२ वर्षीय पूर्व जिविस सदस्य कृतिबहादुर शाही, लालबहादुर बुढा र सोही वडाका स्वास्थ्यकर्मी ३२ वर्षीय खेमराज शाही छन् । त्यस्तै वडा नं.५ गर्खाकोटका २९ वर्षीय स्वास्थ्यकर्मी कृष्णबहादुर शाही र मटेलाकी २५ वर्षीया विद्यार्थी मालिका बस्नेत छिन् ।
दुर्घटनामा परी एक जना मजकोट खोलामा बेपत्ता भएका छन् भने वडा नं. १ का ५५ वर्षीय शिक्षक नरबहादुर बुढा गम्भीर घाइते भएको र हाल उनको सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ । औलभीरबाट खसेको गाडी करिब ५०० मिटर तल रहेको मजकोट खोलामा परेको थियो । यता बाटोको स्तरोन्नति नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको भन्दै उचित क्षतिपूर्तिको माग स्थानीयले गरेको जनाइएको छ ।
स्थानीय रेशम खड्काका अनुसार सडकको ग्रेड नमिलेको, थोत्रा गाडी सञ्चालन गर्ने गरिएको र चालकको लापरवाहीले दुघर्टना भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले राम्रोसँग सञ्चार सम्पर्क हुन नसक्दा स्थानीय किन आक्रोशित भएका हुन् यकिन हुन नसकेको बताए ।
हालसम्म सबै मृतकका शव दुर्घटनास्थलमै रहेको र परिवार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरी पोष्टमार्टम गरिनेसमेत प्रजिअ बरालको भनाइ छ । गाडी चालक गोरख बस्नेत भने दुर्घटनालगत्तै फरार भएको बताइएको छ । घटनास्थल सदरमुकाम खलङ्गादेखि २० कोस पश्चिममा पर्दछ ।